HABARWAA: WAXAAN KU RIYOODAA HOOYADAY!!! | Gaaloos.com
Home » galmada » HABARWAA: WAXAAN KU RIYOODAA HOOYADAY!!!
waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo 18 jir ah, waxaan marayaa sannadkii ugu danbeeyey waxbarashada dugsiga sare, waxaan caqliyeystay anigoon Hooyo lahayn, waxaan ku garaadsaday guriga aabahay, waxaan is arkay anigoo dhexjooga guri aan la iga rabin, waxba kama ogayn aabahay waxa la igu samayn jiray, waxaan nebcaystay aayaday iyo caruurteeda, dadku waxay dhahaan waa walaalahaa, laakiin waxa ay igula dhaqmaan uma eka walaalo.
waxaa caadi noqotay in la i aflagaadeeyo, waxaan marar badan damcay inaan ka tago gurigan, laakiin aabahay ayaan ka cabsan jiray, oo mar badan la igu diro, waxaan garan waayay hab aan ugu sheego! maadaama uu inta badan xaafada joogin, waxaan dareemayaa ciil badan, waxaan ku riyoodaa hooyaday oo aanan xataa sawirkeeda arag, waxaan murugoodaa markaan arko ilmo la socda hooyadood, anigoo hada ah nin weyn ayaan dareemayaa inaan u baahanahay hooyo aragtideeda, laakiin suurtogal iima ahan, waxaa oofsaday Allah markaan dhashay kadib, waxaa ii fiicnayd inaan aniguna raaco, oo aan ka raaxeysto dhibaatadan aan ku jiro.
waxaan dhagaystay barnaamijkan qoyska, marka waxaan jeclaan lahaa inaad talooyin iga siiyo mashaakilkan aan dhamaanayn ee aan ku jiro.
Waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa sida kalsoonida leh ee aad iila wadaagtay arimahaaga, waxaan Allah uga baryayaa inuu hooyadaa u naxariisto iyo intii dhimatayba!
waan kula dareemayaa qiimaha ay ku fadhido hooyo, iyo in lala wadaago nolosha qeybteeda ugu muhiimsan, laakiin waxaa kaa jeclaaday Allah oo qadaray in iinan is arkin, taasna ma ahayn doorashadaada, maha ahan arin kaligaa kugu dhacda, qofka muslimka ahna waa inuu qaato wixii Allah u qoray, maadaama uuba ku khasban yahay.
hooyadaa waxay kaaga baahan tahay inaan u murugooto ma ahan, laakiin waxay kaaga baahan tahay inaad u duceyso, oo naxariis Allah u weydiiso, waana xaq ay kugu leedahay, xataa hadii aadan ku arag nolosha.
hadii aan fiiriyo dhinaca xiriirka aayada iyo walaalahaa, waa arin inta badan dabiici ah, oo lagu arko aayooyin badan inaysan jeclayn in ilmo ninkeedu dhalay, oo ay ka masayrsan tahay hooyadiis inuu la noolaado, hadii aan sii faahfaahiyo, waxaa sababaya masayr ay u qabto hooyadaa, oo xataa dhimatay, mana fiicna in ilmaha adigoo kale ah, looga tago aayo, oo uu la kulmo dhibaatooyinkan aad sheegayso, taas waxaa leh masuuliyadaas aabahaa.
waxaad tahay maanta nin weyn, waxaadna maraysaa xilligii aad mustaqbalkaaga wax qabsan lahayd, arintaan ku soo martayna waxay soo martay rag badan oo adigoo kale, qaar ayaaba kaa darnaa noloshana ka dhacay, yaysan kugu sababin inaad nolosha ka dhacdo, oo aad doorato nolol aan waxbarasho lahayn, dibed wareeg iyo qof aan u fakarin mustaqbalkiisa, hadii aad dhib soo martay waxaaba kuu haray maalmo kooban oo aad dhamaynayso tacliintaada, oo aad helayso xoriyad.
dadka dhibka soo maray waxay kala qaadaan labo wado, kuwo waxaa la weynaata waxa ay soo mareen, waxayna u fakaraan si khaldan, waxayna ka dhacaan nolosha,
kuwana waxay u fakaraan si sax ah, waxayna ka dhigtaan dhibkii ay soo mareen shidaal ay ugu gudbaan guursha, waxayna yeeshaan yoolal qurxoon, waxaan hubaal ah in qofka u adkaysta dhibkaan uusan ku fashilmayn nolosha, maxaa yeelay caqabaduhu waxay iftiimiyaan waddooyinka nolosha.
Allah talo saaro, horeyna u soco, naftaada daji, dadnimadaada adeegso, ha uleexan jid qalloocan, oo aan ku geynayn meel fiican, ogowna in adduunku yahay imtixaan, qofkastana uu qaadanayo dhibka qeybtiisa, adigana ma tihid kuwa ugu liita.
hooyadaa markasta oo aad soo xusuusatid Allah u bari inuu jannadii ka waraabiyo!! aamiin
Title: HABARWAA: WAXAAN KU RIYOODAA HOOYADAY!!!
Posted by galmada Net, Published at 12:04 AM and have 0 comments